Earthquake Forum Mandalay
Sat, Oct 22, 2016 8:30 AM (GMT+6.5)
Mandalay Education College Between 33rd x 34th and 67th x 68th Street, Chan Aye Tharzan Township, Mandalay
FORUM ON EARTHQUAKE PREPAREDNESS AND RESPONSE CAPACITY OF MANDALAY
Mandalay lies closely to the Sagaing Fault, which stretches about 1,000 kilometers from northern Myanmar to the Gulf of Mottama and is the most active fault in the country. Several earthquakes happened in and around Mandalay-Amarapura-Innwa-Sagaing region from the beginning of the year of 1400. Among them the most distinct event is the Innwa earthquake struck on July 16, 1839. The biggest earthquake in its history, withamagnitude of 7, occurred in 1956. The devastation was greater in Sagaing region than Mandalay region and it came to be known as the Great Sagaing Quake. There are 16 out of 28 townships in Mandalay that might be affected by an earthquake. Besides the population in the city, townships situated along Ayeyarwaddy River are those at higher risk (7 townships in the region, plus5in the city). Total population in these (12) townships are around 2,500,000. Therefore preparations for an earthquake are urgently needed in Mandalay. To get proper preparedness,apublic forum will be organized to call all stakeholders; 1) community awareness on earthquake preparedness and response in Mandalay Region 2) to wake up concerned stakeholders for earthquake preparedness and response and 3) to organize key players for strengthening earthquake preparedness and response capacity of Mandalay Region through contingency planning.
မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင် ဒုတိယအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး လူဦးရေသန်း၅၀ကျော်နေထိုင် ကြသည်။ ပထဝီဝင်အနေအထားအရ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့နိုင်သည့်ဒေသတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၄ခုနှစ် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဆူနာမီလှိုင်းသည် နိုင်ငံ၏တောင်ဘက်ပိုင်းရှိ ကမ်းခြေဒေသ များသို့ ထိခိုက်မှုများရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောနာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့်လည်း လူပေါင်း ၁၄၀၀၀၀ ခန့် သေဆုံးခဲ့ပြီး နိုင်ငံ၏ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများသော သဘာဝဘေးအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဂီရိမုန်တိုင်းနှင့် ၂၀၁၅နှင့် ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပေါ် ခဲ့သော ရေလွှမ်းမှုများကြောင့် နိုင်ငံအဝှမ်း ထိခိုက် ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
မန္တလေးမြို့သည် နိုင်ငံတွင်း သက်ဝင်အလှုပ်ရှားဆုံးဖြစ်ပြီး နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှ မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့ထိ ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀ခန့်အကွာအဝေးနှင့် သွယ်တန်းနေသည့် စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့အနီးတွင် ကပ်လျှက်တည်ရှိ သည်။ မန္တလေး၊ အမရပူရ၊ အင်းဝ၊ စစ်ကိုင်းဒေသများတွင် သက္ကရာဇ် ၁၄၀၀ လောက်မှစတင်၍ အင်အားပြင်းထန်သော မြေငလျင်များစွာ လှုပ်ခတ် ခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက် ၁၉၃၉ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အင်းဝမြေငလျင်သည် သိသာ ထင်ရှားဆုံး ဖြစ်ခဲ့သည်။ မှတ်တမ်းအရ အင်အား ၇ အဆင့်ရှိသော မြေငလျင်တစ်ခုသည် ၁၉၅၆ခုနှစ်တွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီး ကြီးမားသော ငလျင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ စစ်ကိုင်းဒေသဘက်တွင် ပို၍ ဆုံရှုံးမှုများသောကြောင့် စစ်ကိုင်းငလျင်ကြီးဟု ပို၍လူသိများခဲ့သည်။ မန္တလေးတိုင်းအတွင်း ၂၈ မြို့နယ်ထဲတွင်မှ ၁၆ မြို့နယ်သည် ငလျင်ဒဏ်ခံစားခဲ့ရသည်။ မြို့များရှိ လူအများ အပြားအပြင် ဧရာဝတီမြစ်ရိုးတစ်လျှောက်ရှိ မြို့နယ် ၁၂ မြို့နယ်တွင်လဲ ငလျင်ဒဏ် ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရသည်။ နည်းလမ်းတကျ ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့် လူထုဖိုရမ်တစ်ခု ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။ ဖိုရမ်၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ (၁) မြေငလျင်နှင့် ပတ်သက်သော ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ၊ တုံ့ပြန်မှုဆောင်ရွက် မှုများအပေါ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်းရှိ ပြည်သူလူထုများ၏ အသိပညာတိုးတက်လာစေရန်၊ (၂)မြေငလျင်နှင့် ပတ်သက်သော ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု၊ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှု များအပေါ် ပါဝင်ပတ်သက်ဆောင်ရွက်နေသူများအကြား နှိုးဆော် မှုတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်၊ (၃) မြေငလျင်နှင့် ပတ်သက်သော အရေးပေါ်အစီအစဉ်များအား ကြိုတင်ရေးဆွဲထားနိုင်ခြင်းဖြင့် ဒေသတွင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု၊ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အားကောင်းလာစေရန် အဓိကပါဝင်ပတ်သက်နေသူများမှ စုစည်းဆောင် ရွက်ရန်တို့ဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ရန် - www.latmat.com.mm/earthquake-forum-mandalay
Email ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ရန် - mandalayrrd544@gmail.com
Telephone ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ရန် - 02 67470 / 02 39457 / 09252871336 / 09422192977 / 09799654692
First aids and emergency medical services will be available.